वृहद् साहित्यिक गोष्ठी
चैत्र ८, चितवन,
‘वर्ग सङ्घर्ष सुनसान भएको बेला साहित्यको प्रभाव बलियो हुन्छ । सबैले सुन्छन् ।’ उक्त कुरा सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवशका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का सचिवालय सदस्य चन्द्रहरी सुवेदी अटलले बताउनु भएको हो । उहाँले लेनिनको भनाई स्मरण गर्दै भन्नुभयो ‘अहिले लेनिनले भनेजस्तै भुसको आगोभित्र वर्गसङ्घर्ष चलेको छ ।’
इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको मुख्य आयोजना र अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक माहासङ्घ, चितवनको सहआयोजनामा चितवनको सौराहामा चैत्र ५ गते सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस र वर्तमान अवस्थामा प्रगतिवादी कविता लेखन विषयमा वृहद् साहित्यिक गोष्ठी सम्मपन्न भयो । सो अवसरमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी सुवेदीले ‘जनवादी क्रान्ति पूरा नभएकाले यतिवेलाको साहित्य लेखनको मुख्य भूमिका जनादी क्रान्तिका पक्षमा जनमत निमार्ण गर्ने हुन्छ’ भन्नु भयो ।
सो अवसरमा अर्का वक्ता प्रा.डा. जगदीशचन्द्र भण्डारीले भन्नुभयो ‘जनयुद्धमा जनताले गरेको वलिदानीको उपहास गर्दै र उदात्त सांस्कृतिक मूल्यप्रति गद्दारी गर्दै आज माओवादीको एउटा हिस्सा प्रतिक्रियावादी सत्तामा भासिएर जनवाद प्राप्त भएको आत्मरती लिँदै जनतामा भ्रम फिँजाइरहेको छ । यसको भण्डाफोर गर्नु नै आज सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस मनाउनु हो ।’ कार्यक्रममा ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, मित्रलाल पंज्ञानी, मोदनाथ मरहट्टा लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
तीन शत्रमा सम्पन्न गोष्ठीको सञ्चालन प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव तथा माहासङ्घका केन्द्रीय महासचिव हिरामणि दुःखीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य सङ्घका चितवन अध्यक्ष रविकिरण निर्जिव र अध्यक्षता प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र ज्ञवालीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको प्रथम शत्रमा प्रतिरोध दिवसको बारेमा विचार विमर्श गरिएको थियो । त्यसपछि दोश्रो शत्र सुरुआत भयो । दोश्रो सत्रमा ‘वर्तमान परिवेसमा प्रगतिवादी कवितालेखन’ विषयमा अन्तरक्रियात्मक गाष्ठी गरियो । उक्त गोष्ठीमा प्रतिष्ठानका कार्यसमिति सदस्य प्रा.डा. ताराकान्त पाण्ड्ेय र साहित्कार डि.आर. पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पाण्डे्यले भन्नुभयो ‘प्रगतिवादी लेखन भन्ने वित्तिकै माक्र्सवादी यथार्थवादी लेखन भन्ने बुझिन्छ । यसलाई प्रगतिवादी यथाथवादी लेखन पनि भनिन्छ । यथार्थवादको मुख्य शर्त यथार्थपतिको निष्ठा र विसङ्गतिवादका विरुद्धको लेखन हो । यथार्थ पनि अनेकौँ छन् । कुन यथार्थलाई आत्मसात गर्ने भन्नेकुरा लेखकको दृष्टिकोणमा भर पर्छ ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो ‘जीवनलाई सङ्गतिपूर्ण बनाउनु पर्छ । सङ्गतिको खोजी गर्नु यथार्थको उद्देश्य हुनुपर्छ ।’ त्यसैगरी अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता डि. आर. पोखरेलले वर्तमान परिवेसको चर्चा गर्दै आज नेपालमा कम्युनिष्टको सत्ता भनेर भ्रम पारिएको छ, र साहित्यले त्यसका विरुद्ध व्यापक असन्तुष्टी र आक्रोस व्यक्त गरेका छन् भन्नुभयो । कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि गोष्टीमा सहभागी सबैले टिप्पणी गरेका थिए । डा.पाण्ड्ेयले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा बिचबिचमा दोहोरो अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
तेस्रो शत्रमा कविता गोष्टी सम्पन्न गरियो । रविकिरण निर्जिवको अध्यक्षता र पूर्णबहादुर अधिकारीको सञ्चालनमा भएको कविता गोष्टीमा ३१ जनाले कविता वाचन गरेका थिए । कविता वाचन गर्ने श्रष्टाहरूमा हिरामणि दुःखी, प्रा.डा.जगदिशचन्द्र भण्डारी, मित्रलाल पंज्ञानी, अनिल श्रेष्ठ, रविकिरण निर्जिव, चन्द्रा थानी, खगेश्वर भण्डारी, चित्रबहादुर थारु, पूर्णबहादुर अधिकारी, दीपक विश्वकर्मा, गौरी दाहाल, अर्जुन ढकाल, ईश्वरी ओझा, सीता साप्कोटा, तिलकराज पौडेल, देवेन्द्र लम्साल, विष्णु न्योपाने, डा.विदूर वस्ती, ईश्वरी गुरागाइँ, प्रकाश चापागाइँ, हरिहर सविता, कविता साप्कोटा, विमला चन्द, सावित्रा पौडेल, राजेन्द्र घायल, हरी गजुरेल, प्रकाश खनाल, उमेश आचार्य, ठाकुरप्रसाद सिग्देल, तुलसी पण्डित, राजेन्द्र हमाल, लगायतले वाचन गरेका थिए । कविता वाचनपश्चात कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि ईश्वरचन्द्र ज्ञवालीले वाचित कविताहरूका बारेमा समीक्षा गर्नुभएको थियो ।
उक्त दिन बिहान चितवन स्थित अक्षर समुहको आयोजनामा चियासँग कविता बाचन गरिएको थियो । समुहका अध्यक्ष ईश्वर कंडेलको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा अखिल नेपाल लेखक सङ्घका केन्द्रीय माहासचिव कवि अनिल श्रेष्ठले एकल कविता वाचन गरेका थिए । आफ्ना १३ वटा कविता वाचन सँगै कविता माथि सहभागीहरूबाट समीक्षा गरिएको थियो ।